SEO na peeji: gịnị ka ọ bụ na otu esi emeziwanye ya na eCommerce | ECommerce ozi ọma
Mwube eCommerce bụ ihe dị mfe ịme taa. Ma ị nwere azụmahịa nke anụ ahụ ma chọọ ịnọ na Internetntanetị, ma ọ bụ gbasaa iji ree ọ bụghị naanị ebe ị bi, kamakwa n'ime mba ahụ, ma ọ bụ ọbụna n'èzí ya, eziokwu bụ na nke a bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma. Mana dịka ị ga - esi merie nsogbu na gburugburu ebe obibi, na nke mebere enwere. Na otu n’ime ihe ndị kasị dị mgbagwoju anya bụ SEO na ibe.
You nụla banyere ya? Ma ihe eji ya na gịnị kpatara ị ga - eji meziwanye ya? Ọ bụrụ na ọ bụ echiche nke ị nụrụ maka ya mana ọ bụghị ihe doro gị anya, ma ọ bụ na ị maghị etu esi abịaru ya nso maka eCommerce gị, ebe a ka anyị nyere gị igodo ka ị ghọta ya na nke kacha mma.
1 Gịnị bụ SEO na ibe
1.1 Yabụ kedu ihe dị na peeji SEO maka?
2 Otu esi eme ezigbo SEO na peeji
3 Otu esi emezi ya na eCommerce
Gịnị bụ SEO na ibe
Iji malite, i kwesịrị ịghọta ihe okwu a na-ezo aka na ya. O sitere n’asụsụ Bekee n’ezie, ọ bụ otu n’ime okwu ndị anyị ji ezo aka n’ihe njikarịcha dị na peeji ahụ. Nke ahụ bụ, na ederede ederede nke ọma, na enwere isiokwu ndị ha ji achọta anyị, na Google na-ahụ anyị dịka ibe nwere ike ịgụta ...
El SEO na peeji nke na-ezo aka na nhazi ọnọdụ, ya mere ọ dabere na njikarịcha nke ụlọ ahịa gị n'ịntanetị iji gbanwee ma rụọ ọrụ na koodu HTML iji mee ka ọ zute njirisi ndị Google tụrụ aro ka nhazi ahụ wee gbagoo na nke ahụ pụtara na nsonaazụ ọchụchọ mbụ.
Yabụ kedu ihe dị na peeji SEO maka?
Were ya na ị ga-eji ọtụtụ iberibe ala wuo nnukwu ụlọ. Have nwere foto nke otu nnukwu ụlọ kwesịrị ịdị. Nakwa ntuziaka ụfọdụ na-agwa gị ihe ị kwesịrị ime iji mee ka ọ dị ka nke dị na foto ahụ. Ọfọn, ebe nrụọrụ weebụ yiri nke ahụ.
Foto ahụ ga - abụ ihu akwụkwọ websaịtị gị, ihe ị hụrụ. Ma ọ ga-atọgbọ chakoo. Ugbu a, ịgbaso ntuziaka (nke Google nyere gị) na ị nwere ike itinye iberibe (ọdịnaya, njikọ, isi okwu, wdg) na ibe iji "nye ya ndụ".
Ọ bụrụ na ị mee ya nke ọma, na Ọ ga-emetụta ọnọdụ nke ibe ahụ, n'ihi na ị na-agwa Google ihe ọrụ nke ibe ahụ bụ na ị meela ihe niile nke ọma ka ị nwee ike ịbụ "n'akụkụ Google." Na, ọ bụrụ na Google na-ahụ na ị naghị eme iwu, ị nwere ike ịdaba na igwe nchọ ya, ma ọ bụ ọbụna gbochie onwe gị na nsonaazụ ahụ. Ya mere kpachara anya maka "aghụghọ" ma ọ bụ omume ndị ị na-ewere na ha adịghị mma.
Otu esi eme ezigbo SEO na peeji
Akụkụ kachasị mkpa ma dị mkpa nke ibe SEO bụ ihe ndị a:
Aha nke ibe. Peeji ọ bụla ga-enwerịrị aha dị mma, nke na-agaghị agafe mkpụrụ edemede 70 ma ọ dabara na ihe onye ọrụ (na Google) ga - achọta n'ime ya).
Meta nkọwa. Nke a bụ mpempe akwụkwọ edere n'okpuru aha. Ọ bụrụ n'ịle ya anya wee mee nchọta na Google, ị ga - ahụ na ihe mbụ (ebe njikọ ịpị pụtara, bụ aha). Ihe dị n'okpuru bụ ihe a na-akpọ nkọwa meta. Ga - eme ike gị niile, na - agabigaghị mkpụrụ edemede 160 ma ọ bụrụ na ọ ga - ekwe omume, na - akọwa ihe a ga - ahụ na ibe ahụ. Na ee, ị ga-eme ya na ibe gị niile.
URL. Akụkụ ọzọ dị mkpa na ibe SEO. Nke kacha mma, wepu edemede, preposition, adverbs ... ma hapụ naanị okwu mmasị.
Nkụnye isi. Google hụrụ ha n'anya. Nọmalị aha nke ibe nwere isiokwu H1, mana mgbe ị na-eme ederede nke ibe ị kwesịrị iji isi okwu karịa (H2 na H3 opekempe).
Ihe onyonyo. Ruo oge ụfọdụ, Google na-emesi ihe oyiyi ike, ọ bụghị naanị na ha dị ọkụ ka ha wee kwụọ ngwa ngwa, kamakwa na ha kachasị mma, na aha ha, aha ọzọ na akụkọ ifo.
Njikọ dị n'ime. Nke ahụ bụ, e jikọtara ibe ya na ndị ọzọ n'otu ụlọ ahịa ahụ. Nke a, kwere na ya ma ọ bụ na ikwenyeghi, na-enye gị ohere iwulite "tangle", dị ka ududo ududo ebe ibe niile jikọtara onwe ha.
Ọdịnaya. Isi ihe a na - agbaso isi okwu na ka ị na - ede ihe, nke ka mma. Ma kpachara anya, enweghị ọdịnaya abụọ, ma ọ bụ dee ede, ebe Google na-achọpụta ya ugbu a ma ọ nwere ike imerụ gị ahụ. Kwe ka ha buru ederede nwere isi, na-ekwughachi otu echiche otu puku ugboro. Ga-etinye ihe na ederede ahụ.
Na-anabata saịtị. Ọ bụrụ na ị nụtụla ya na ị maghị ihe ọ bụ, ọ pụtara na enwere ike ilele web ahụ nke ọma na ekwentị, ọ bụghị naanị na kọmputa gị. Lezie anya, Google na-enye nke a nnukwu mkpa.
Na-agba ọsọ ọsọ. Ebe nrụọrụ weebụ na-ewe ogologo oge iji kwado ihe ga-eme bụ ịga leta ya. Ọbụghị Google. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa nyochaa nke a.
Sitemap na Robots.txt. N'ikpeazụ, akụkụ abụọ "ntanetị" nke weebụ. Ihe ntanetị ahụ bụ faịlụ XML n'ezie nke ndị na-arụ ọrụ crawler na-edepụta ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọ bụghị iwu, mana ọ bụrụ na Google kwadoro ya, ọ ga-abụ maka ihe kpatara ya. N'ihe banyere Robots.txt ọ bụ faịlụ ọzọ maka crawlers, ebe ọ na-ekwu peeji nke ị na-achọghị ka edepụtara ya.
Otu esi emezi ya na eCommerce
Obi abụọ adịghị ya na, ọ bụrụ na ị bulie eCommerce gị na ihe anyị hụburu, ị ga-enweta nsonaazụ ọma, ị ga-eme Google n'akụkụ gị, ọ bụghị nke ọzọ. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ aghụghọ ga - enyere gị aka imelite peeji nke SEO nke ụlọ ahịa gị n'ịntanetị:
Jiri isi okwu. Iji mee nke a, mee obere nyocha wee hụ ka ndị ọrụ si achọ iji mkpụrụokwu ndị ahụ na weebụsaịtị gị. Iji mee nke a, ị nwere ike iji Google Trends ma ọ bụ ngwa ịkwụ ụgwọ ga-eduzi gị na isiokwu kachasị mma.
Kpachara anya maka edemede na mkpado. Ha dị oke mkpa na yabụ na ị gaghị na - ejikọ saịtị nke dị mfe ịnyagharịa, kamakwa mgbe ọ na - edepụta ya. N'ezie, etinyela ọtụtụ aha maka isiokwu, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume na edemede ndị ahụ họrọ naanị otu ka e wee ghara ịmegharị peeji ndị ahụ.
Nọrọ na-ege ntị maka mgbanwe site na Google. Mgbe ọ bụla, Google gbanwere ntuziaka ya, na-eme ihe na-arụ ọrụ na mbụ, ugbu a adịghị, ma ọ bụ ka njọ, na-enye gị nsogbu. Ya mere gbalịa ịchịkwa ozi nke Google iji gbanwee maka nke mbụ.
N'ụzọ dị otú a, ị ga-ahụ na ibe SEO dị n'akụkụ gị na eCommerce gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » SEO na ibe